I-Condo enamagumbi amabili okulala - I-Airbnb
I-Condo enamagumbi amabili okulala
Schroeder, Minnesota, i-United States
Igumbi e-i-resort ibungazwe ngu-Bruce
U-Bruce Ungumbungazi ovelele
Leli gumbi liyingxenye ye-Superior Ridge Resort Motel. I-Two Bedroom Condo iwuhlobo lwethu olukhulu lwamakamelo. Inamakamelo okulala ahlukene angu-2 anemibhede eyindlovukazi engu-4, amagumbi okugeza angu-2, ikhishi eligcwele elinakho konke okudingekayo ukuze kuphekwe, kanye nedekhi. Leli gumbi lilungele amaqembu afuna amagumbi okulala ahlukene, indawo eningi, noma ahlele ukupheka.
ISuperior Ridge iyindawo yokuphumula ephethwe futhi esebenzayo. Abanikazi/abaphathi uBruce noSheryl bahlala esizeni futhi bayatholakala ukuze basize nganoma yini ongayidinga. I-Superior Ridge iyingxube ephelele yemvelo nokunethezeka. Sitholakala ehlathini le-boreal, umzila oya ehlathini ungamagxathu nje ukusuka ezakhiweni zethu. Siseduze ne-Tofte futhi ibanga elifushane nje eliyimizuzu eyi-12 ukusuka e-Lutsen Mountains. Hlola i-North Shore bese ubuyela ekamelweni lakho ukuze uphumule.
Amenities at Superior Ridge include nearby trails for snowmobiling, walking and biking, free dvd rentals, a ski waxing room, a badminton court, a basketball hoop, outdoor charcoal grills, outdoor firepits, and a sauna.
4.86 out of 5 stars from 127 reviews
4.86 (izibuyekezo ezingu-127)
ISuperior Ridge Resort-Motel itholakala endaweni yaseTofte/Lutsen/Schroeder, indawo kaNdunankulu yeLake Superior’s North Shore. Hamba ngezinyawo futhi uhlole amapaki endawo, imifula, nezindlela ezihlanganisa iTemperance River State Park, iCaribou River, iCross River, iSugarloaf Cove, iCarlton Peak, iTettegouche State Park, iSplit Rock Lighthouse, iPalisade Head kanye neSuperior Hiking Trail. I-Gitchi Gami State Trail egandayiwe esuka e-Schroeder ukuya e-Tofte eqhubekela ku-Lutsen Ski Hill Road iyintandokazi yemindeni efuna ukuhamba ngebhayisikili/ukuhamba ngezinyawo okushelelayo.
Ukuhamba kancane ukhuphuka noma yimuphi umgwaqo we-U.S. Forest Service kuzokuyisa emachibini amaningi angaphakathi nezwe noma endaweni ye-Boundary Waters Canoe. Ehlobo, gibela i-Lutsen Mountains Gondola kanye ne-Alpine Slide noma igalofu e-27 Hole Superior National Golf Course e-Lutsen. Ebusika, ukushushuluza ekwehleni ezintabeni zaseLutsen, ukushushuluza eqhweni ku-Sugar Bush Trail e-Sawtooth Mountains noma i-snowmobile e-Northshore nase-Tomahawk State Trails.
My wife Sheryl and I have lived on Minnesota's North Shore since 1993.
Abanikazi/abaphathi bahlala kule ndawo futhi bayatholakala ukuze bakusize ezikhathini eziningi. Bazise uma kukhona okudingayo noma uma unemibuzo mayelana nendawo.
UBruce Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Schroeder namaphethelo